कप्तान लोरिसबिनै फ्रान्स जर्मनीको सामना गर्दै -बिगुल न्यूज
कप्तान लोरिसबिनै फ्रान्स जर्मनीको सामना गर्दै
पेरिस– रुस विश्वकप विजेता फ्रान्स आफ्नो कप्तान ह्युगो लोरिस विना पहिलो पटक मैदानमा उत्रिने भएको छ । विश्वकप पछि पहिलो पटक मैदानमा प्रवेश गर्दै गरेको फ्रान्स राष्ट्रिय टोली आफ्नो पहिलो मैत्रिपुर्ण खेलमा जर्मनीको सामना गर्दैै छ ।
बिहिबार लोरिसको स्थान बेन्जामिन लेकोम्टेले लिने प्रशिक्षक डिडिएर देशच्याम्पले बताएका छन् । लोरिस दुई खेलका लागि मैदान बाहिर रहने छन् । युवा फ्रान्सेली टिमले विश्वकपको फाइनलमा क्रोएसियालाई ४–२ ले पराजित गरेको थियो । जसमा एन्टोनी ग्रिजम्यानले आफ्नो स्टारडम जिवित राखे । युवा खेलाडी किलीयन एमबाप्पे ६० वर्षपछि विश्वकपको फाइनल खेलमा गोल गर्ने पहिलो युवा खेलाडी बने ।
यसअघि ब्राजिलियन पेले विश्वकपको फाइनल खेलमा गोल गर्ने पहिलो युवा खेलाडी बनेका थिए । युइएफए नेसन्स लिगको उद्घाटन खेलमा फ्रान्सले जर्मनीको सामना गर्न लागेको हो । जुन नयाँ प्रतियोगिता हो । जुन विशेष गरि अनुकुल अन्तराष्ट्रियकरणको प्रतिस्थापन गर्न उक्त प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो । डेसच्याम्पले पछिल्लो हप्ता आफ्नो २३ सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका थिए । फ्रान्सले पहिलो पटक १९९८ मा आफ्नै घरेलु मैदानमा आयोजना भएको विश्वकपको उपाधि जितेको थियो ।
प्रकाशित : बुधबार, भदौ २०, २०७५१४:३९
इटालियन लिगमा सर्वाधिक कमाउनेहरु
वाम गठबन्धनका उम्मेदवारको गाडीमा आगजनी
यति लामो समयसम्म चुनाव के राजाले रोकेको थियो र ?
आइसिसी विश्व लिग क्रिकेट च्याम्पियनसिप : नेपालद्वारा केन्या सात विकेटले पराजित
काठमाडौं १ का उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले कहाँबाट हाले भाेट
एम्बुलेन्स र बस ठोक्किँदा बस पल्टिएर १७ घाइते !
काँग्रेस १०, एमाले छ र लोकतान्त्रिक फोरम चारवडामा विजयी